Darbiga iyo dayacaa kulanka iiga daran! – Bashiir M. Xersi
Darbiga iyo dayacaa kulanka iiga daran!
Posted on 7 Jul 2016 8 Jul 2016 by Bashiir M. Xersi	Posted in Qoraallo
MW Xasan Sheekh ma la kulmay RW Israa’iil Benyamin Netanyahu, mise, la ma kulmin ayey tolkeey ku murmayeen maalnahan oo dhan. Kaliya ma ahan, ee ma bannaan tahay, mise, ma bannaana ayuu muranku ku qotomay?.
Ani ahaan, aragtidayda qofeed, dan iyo heello ka ma lihi, qofka, qolada, qawmiyadda iyo qaranka uu la kulmayo MW Xasan, marba hadduu u qiblaysto qorrax soo bax walba QIBLADA QABBAANIYAASHA! Inta kale, aniga agteyda tirsi ka ma lahan iyo tayo.
Nin carab ku xiran, oo addoon u ah iyo la hayste u dabran, qabbirna ay beri hore ku xiratay, ee u dhufanaan, anigu ma filayo, in uu la kulmayo RW Benyamin Netanyahu, ee horta, ma la kulmay, mise, arrintii markabka ku kiraysnaa magaca ganacsato Soomaaliyeed, siyaasiyiinna lugta la galay ayaa wax laga weydiiyey, maadaama siyaasiyiintu ay aad uga agdhaw yihiin MW Xasan? Nin la xisaabinayo, la la ma kulmin!
Waxaan is dhihi karaa, wuxuu ahaa, siyaasadda arrimaha dibadda go’aannadii la qaatay, kii ugu qummanaa, marka la fiiriyo kii xiriirka loogu jaray Iiraan, ee aan na qusayn, waxna ka dhexmarin.
Hore Kenya iyo Israa’iil waxaa u dhexmaray heshiis ah, in Israa’iil ay Kenya gacan ka siiso la dagaallanka argagixisada! Ma ogtahay argagixisada Kenya la dagaalayso? Ma taqaan xagjirka ay Kenya dagaalka ku la jirto? Waa adiga sadarradan aqrinaya. Waraa Soomaali! Is ku maqan, ka la maqan, lagu maqan yahay!
Waxaan xasuustaa, in ISLAAX dhaleeceeyeen, buuqna ku fureen MW Xasan Sheekh, oo dalka Masar uga qaybgalayey xaflad caleemo saar ah, oo lagu maamuusayey MW C/fattah Khalil al-Sisi. Waxaa la yaab lahayd waxa dal kale ka dhacay, maxaa naga galay, keennii ayaan u tabar la’ nahaye? Ta kale, casuumad loo fidiyey madaxda dawladda, ma waxay u diidayaan, in xubin Ikhwaan ah xiran yahay, horeba madaxweyne ha u soo noqdee? Yaab!
“Iska daaya eexdee
Qofka raba, gugan 2016, qarniga 21aad, in uu ku hago hannaanka siyaasadeedka ee dalka, aragtida dagaalkii qaboobaa iyo ayaamihii xornimadoonka, waxaan ku arkaa ma GUDBE iyo MAALINJOOG!
Galmudug iyo Guuleed gu’ ka dib